GoGettaz Agripreneur Prize: Ndị ọchụnta ego 14 nke Afrịka meriri US $ 110,000
Onyinye GoGettaz Agripreneur: Ndị ọchụnta ego Afrịka 14 meriri US $ 110,000
Agribusiness abụọ na -arụ ọrụ maka mgbanwe usoro nri na Africa na -enweta nnukwu ihe nrite na asọmpi GoGettaz Agripreneur nke atọ kwa afọ.
Mmadụ iri na anọ na -agba ume, ndị ọchụnta ego na -eto eto si n'ofe Afrịka, zigara ndị ọka ikpe na ndị nnọchi anya a ma ama n'egwuregwu ọgbọ nke ọgbọ. Asọmpi Nrite Afrịka GoGettaz Agripreneur nke emere na 2021 AGRF Virtual Summit ma gbasaa na ntanetị nye ndị na -ege ntị nde mmadụ na nyiwe ndị ọzọ.
Ndị rụpụtara ọgbọ nke ọgbọ Afrịka Svein Tore Holsether, onye isi oche na onye isi nke Yara International, na Strive Masiyiwa, Onye guzobere na onye isi oche nke Econet, mechara kwupụta ndị mmeri abụọ nke nnukwu onyinye $ 50,000 US mgbe Onye isi oche AGRA Agnes Kalibata kwupụtara ndị mmeri nke ihe nrite mmetụta anọ. iji nweta $ 2,500 ọ bụla.
Inweta nkwanye ugwu kacha elu na ụdị agripreneur nwanyị bụ Tracy Kimathi, onye guzobere Tree_Sea.mals na Kenya onye mepụtara ma webata Baridi: ime ụlọ na-eme ka ọkụ na-enwu ọkụ nke anyanwụ na ohere IoT dịpụrụ adịpụ, na-enwe ọhụụ iji belata mfu mgbe ogbugbu na-aga n'ihu n'agụ ọnụ ahịa anụ ụlọ nke East Africa niile. .
N'ime ụdị nwoke, Nshimiyimana Alexandre, onye nchoputa Sanit Wing Ltd na Rwanda, bu ụzọ buru ụzọ lekwasị anya n'ime obodo, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ube oyibo na-arụ ọrụ nke na-ere mmanụ, ihe ịchọ mma na ncha.
"Ọ kpaliri m ịhụ agụụ na ụdị agribusiness na-atọ ụtọ nke ndị ọchụnta ego a na-eto eto malitere n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-akpata ego maka onwe ha na mba ha, yana ezigbo mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na gburugburu ebe obibi site na ihe ọhụrụ ha na-eme ihu igwe," kwuru Svein Tore Holsether.
"Ọ bụ ezie na a manyere ọtụtụ azụmaahịa ebe niile ka ha nwee ike ịlanarị n'oge ajọ ọrịa COVID, ndị ọchụnta ego ikpeazụ Top-14 nke afọ a lekwasịrị anya n'ụzọ iji mepụta ihe ọhụrụ, zụlite azụmaahịa ha ma gaa n'ihu na-ejere obodo ha ozi," kwuru Masiyiwa onye na -ejekwa ozi dị ka onye nnọchi anya AU maka nzaghachi COVID.
“Site na usoro ọhụrụ ha, ụdị azụmaahịa na teknụzụ agri n'ofe ọnụ ahịa niile, anyị na-akpọ ndị ọchụnta ego a na ndị na-emepụta ihe ọhụrụ 'Generation Africa GoGettaz'-ọdịnihu nri na kọntinent anyị. Anyị na -ekele ndị ikpeazụ 14 na ndị niile sonyere, " o kwuru.
Ewezuga nnukwu ihe nrite abụọ ahụ, ụkpụrụ asọmpi asọmpi GoGettaz Agripreneur na ndị na -asọ mpi site na ihe nrite mmetụta mmekọrịta mmadụ na gburugburu ebe obibi anọ, nke ọ bụla nwere ihe nrite ego US $ 2,500.
Ndị nnata nke mmetụta mmetụta maka 2021 bụ Fily Keita, onye nchoputa na onye isi Agrowomen na Mali; Diana Orembe, onye nchoputa na onye isi oche nke NovFeed na Tanzania; Gabriel Eze, onye nchoputa na COO nke Rural Farmers Hub na Nigeria; na Costantine Edward, onye guzobere AgriLife na Tanzania.
Site na mwepụta ya na 2019, Asọmpi Nrite GoGettaz Agripreneur abụrụla ngwa ngwa n'ime ihe omume a na-atụ anya ya maka agribusinesses nke ndị ntorobịa gafee kọntinent ahụ.
N'oge windo ngwa sitere na etiti Eprel ruo etiti June 2021, Asọmpi Nrite GoGettaz Agripreneur nke atọ kwa afọ sere ngwa sitere na mba 40 Afrịka na 3,298 ndị agripreneurs dị njikere malitere njem ngwa.
Ọkwa dị elu nke ngwa mere ka ọ ghara ikwe omume ịhọrọ Top 12, dịka eburu n'obi na mbụ ndị ọka ikpe gbara gburugburu họọrọ kama iziga mgbanwe 14 na -eme ka ndị agripreneurs ihu ndị ọka ikpe GoGettaz na asọmpi ịgba ikpeazụ, gbasaa na nnọkọ AGRF yana. usoro ntanetị ndị ọzọ.
N'etiti ndị ikpeazụ, "Ọrụ niile, ma gbadoro anya ma ọ bụ rite uru na ndị ọrụ ugbo pere mpe n'Africa n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ," Svein Tore Holsether kwuru.
“Obi abụọ adịghị ya, ndị ọchụnta ego na -eto eto ga -ebute ụzọ mgbanwe anyị chọrọ. GoGettaz karịrị nnọọ asọmpi asọmpi. Maka m, ọ na -aghọ ngwa ngwa ọdịnala nke na -eme ka amamịghe, nkwụsi ike, nkwuwa okwu, nke ndị na -eto eto na -azụ ahịa agrifood nke Africa, ” Ada Osakwe, onye nchoputa na onye njikwa nke Agrolay Ventures, onye nchoputa na onye isi njikwa Nuli Juices, na onye nnochite anya Generation Africa.
Ndị mmeri nke US $ 50,000 GoGettaz Agripreneur Prize
Tracy Kimathi, onye guzobere Tree_Sea.mals, Baridi, na Kenya
“Cheedị na ibi n'ime ụwa bụ 30% anụ a na -emepụta na -ere ure kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ nha mfu 100 nde ehi n'ofe Afrịka, ” Tracy Kimathi kwuru na ọkwa ya nye ndị ikpe.
Nke a bụ nsogbu ya na Baridi na-edozi, ihe ọhụrụ na-echekwa nchekwa nchekwa oyi iji belata mfu mgbe ogbugbu dị na ọnụ ahịa anụ ụlọ dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa, na-eji usoro nnweta ego "dị ka ị ga-adị mma".
Tracy na -ekwu chillers anyanwụ ha "Na -ekwe nkwa uru akụ na ụba nke US $ 5 000 kwa afọ maka onye na -ere ụlọ na -agbazite otu square mita nke ohere oyi."
Ọzọkwa, ọ na -ekwu, "Otu ngalaba Baridi nwere ike imepụta nnukwu ọrụ 190, chekwaa ihe ruru tọn 1500 nke ikuku CO2 na, kwa afọ, chekwaa anụ karịrị 280,000 n'arọ."
Na -aza ajụjụ onye ọka ikpe Ellen Cathrine Rasmussen, EVP maka Scalable Enterprises na Norfund, Tracy kọwara, “Anyị nwere ụdị azụmaahịa abụọ ugbu a. Anyị nwere ụdị B2C, nke bụ usoro ịkwụ ụgwọ ka anyị na-eji agbụ bara uru anụ ụlọ. Mgbe ahụ anyị nwere B2B nke bụ usoro mmepụta mgbazinye nke anyị ga-eresị ndị ahịa azụmaahịa. ”
N'ịbụ onye na -enweghị mgbagha, nke ziri ezi, na onye maara ihe niile gbasara azụmaahịa ya, ihe ngosi Tracy na azịza doro anya nke ajụjụ ndị ahụ masịrị ndị ikpe ahụ.
Onye ọka ikpe Ishmael Sunga, onye isi oche nke SACAU kwuru, “Ike na ịnụ ọkụ n'obi n'ihe ngosi gị na -amasị m. Site n'ụdị echiche ahụ, omume na ilepụ anya n'ihu, ị ga -aga ebe, ma ọ bụrụ na ị na -echekwa ya. ”
Site na otu ụlọ ọrụ amalitela ma na -arụ ọrụ, ha na -eji ego GoGettaz Agripreneur Prize iji mee ka mmepụta na mwepụta nke abụọ Baridi dị n'ahịa anụ dị na Nairobi, ebe ha na -emepe ma na -anwale ụdị azụmaahịa atọ n'ọdịnihu.
Nshimiyimana Alexandre, onye nchoputa Sanit Wing Ltd na Rwanda
Ihe karịrị tonnes ube oyibo 141,000 na -emebi na Rwanda kwa afọ. Iji gboo ihe mkpofu a mgbe owuwe ihe ubi gasịrị, Nshimiyimana Alexandre dị afọ 30 kpebiri ịmalite ụlọ ọrụ obodo a na-akpọ Sanit Wing nke na-emezi nke ọma ugbu a na-eto n'ime obodo, avocados na-enweghị ọgwụ na-egbu egbu n'ime mmanụ na ihe ịchọ mma.
Nshimye kwuru, “Afọ ise gara aga, achọpụtara m na Rwanda na -emefu ihe dị ka nde US $ 35 iji bubata ihe ịchọ mma. Na Rwanda na -ebubata mmanụ metric ton 125, Rwanda nọkwa n'ọkwa nke atọ n'Afrịka na mmepụta ube oyibo. "
Ha atụgharịala ọnụọgụ ndị a ka ọ bụrụ azụmahịa na -emepe obodo ya ọrụ na ohere inweta ego.
Mgbe onye ọka ikpe Thierno Diarra sitere na Bank Development Bank jụrụ Nshimye ihe kpatara na ọ raparaghị na ngwaahịa a na oke oke, Nshimye zara, sị: “Gịnị kpatara m ga -eji mee mmanụ naanị iji nweta ego? Achọrọ m belata mbubata.
Achọrọ m idozi nsogbu ịdị ọcha nke dị n'obodo m. Ị makwa ka ncha si azọpụta ndụ n'oge ọrịa a? Ị ma ole ncha mba a bubatara? Anyị nwere ike ime ya site na mkpụrụ osisi a. Chee echiche banyere nke ahụ, ”ka o kwuru na -ejide ube oyibo. "Yabụ, ọ bụrụ na m lekwasị anya na mmanụ, ndị m ga -anwụ na COVID n'ihi na ha enweghị ncha?"
Sanit Wing nwere ọhụụ ka ọ bụrụ onye isi na-emepụta ngwaahịa ube oyibo na ihe ndị ọzọ na Afrịka.
Ha na -eji mkpụrụ osisi na -eto ọtụtụ osisi ube oyibo n'ime obodo ha wee kụọ osisi nde abụọ ruo taa, ebe akọ na uche ha na -ezere ihe ọkụkụ na -emebi gburugburu ebe obibi.
Site na ihe nrite GoGettaz Agripreneur, Sanit Wing na -achọ ịbawanye arụmọrụ na ọsọ ọsọ iji mepụta ọrụ ọhụrụ 50, ma na -akwalite mmepụta ngwaahịa iji gboo mkpa ahịa dị ọkụ.
Ndị mmeri ihe nrite mmetụta
Fily Keita, onye nchoputa na onye isi Agrowomen na Mali. Agrowomen bụ mmalite ọka na mpaghara nhazi mkpụrụ akụ nke ndị mmekọ na ndị ọrụ ugbo na-arụkọ ọrụ, na-enyere ha aka ree ngwaahịa ha site na nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa nri, mgbasa ozi mmekọrịta na webụsaịtị e-commerce. Ọrụ mmekọrịta nke Agrowomen bụ ike akụ na ụba maka ụmụ nwanyị yana nchekwa nri maka Mali.
Diana Orembe, onye nchoputa na onye isi oche nke NovFeed na Tanzania. Diana na ụlọ ọrụ agritech mmalite ya azụlitela teknụzụ kemịkalụ na-enweghị kemịkalụ iji wezuga mkpofu ahịhịa iji mepụta ọnụ ahịa dị ọnụ ala, na-adigide, yana ihe dị mma sitere na nje bacteria dị mma maka ahịa azụ mmiri.
Gabriel Eze, onye nchoputa na COO nke Rural Farmers Hub na Nigeria. Gabriel na ndị otu ya ewepụtala usoro nhazi nkenke flagship akpọrọ "Capture" nke na-eji nnukwu data iji nyere aka melite ahụike ihe ọkụkụ na ikike ntule ala maka ndị ọrụ ugbo pere mpe, ihe ọkụkụ na ndị na-emepụta ihe.
Costantine Edward, onye guzobere AgriLife na Tanzania. Ụlọ ọrụ Costantine na-emepụta protein ọzọ dabere na ụmụ ahụhụ na-eji teknụzụ na-emebi ihe na-edozi ahụ. Site n'iji ụmụ ahụhụ eme ihe, AgriLife na-enye ụzọ ọzọ protein na-adigide, na-agbanwe agbanwe na ọnụ ahịa nke ọma maka anụ ọkụkọ na nri azụ.
Ndepụta zuru oke nke GoGettaz Agripreneur Prize Top 2021
Recycles na-efufu site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri dị ka peels nri na mbelata n'ime nri anụmanụ dị ọnụ ala maka anụ ọkụkọ, ezì na ehi mmiri ara ehi (M)
Ewebatala teknụzụ ụmụ ahụhụ na-eri nri na-edozi ahụ site n'iji oji ojii na-efe efe ka ọ na-agagharị ihe mkpofu n'ime protein gburugburu ebe obibi maka nri anụmanụ (M)
Teknụzụ nkeonwe na -enyere ndị ọrụ ugbo obere aka ịnata ego dijitalụ wee wulite njirimara ego ha na -emekwa ka kredit nweta (M)
Na-ere ahịa ma na-ere ụdị nri niile, ọka, mkpụrụ osisi ọhụrụ, na akwụkwọ nri, na-ebelata mfu nke owuwe ihe ubi site na nchekwa oyi ka na-eji ike emegharị emegharị eme ihe niile (M)
Nchọpụta, ugbo, usoro, na ahịa jiri nlezianya họrọ ụmụ ahụhụ dị ka isi mmalite na -adigide ma dịkwa ọnụ ala iji nye anụ ọkụkọ nri (M)
Ọ na-enye ọrụ ugbo na isi ngwaahịa akpọrọ Capture nke na-eji algọridim nkeonwe yana nnukwu data iji chọpụta ahụike na ala, wee mepụta ihe dị nso na nghọta ọrụ ugbo na ndụmọdụ (M)
Ebe 90% nke ndị na-ebubata ya bụ ndị ọrụ ugbo obodo, Sanit Wing na-arụpụta ma na-emepụta avocados na-enweghị ọgwụ n'ime mmanụ dị oke mma, ihe ntecha na ncha (M)
Na -agbakwụnye uru mkpụrụ ọka na mkpụrụ mmanụ mpaghara site na nhazi mkpụrụ sesame na imepụta igwe oyi na mmanụ sesame eke, nri na osikapa na -atọ ụtọ, na -arụkọ ọrụ na ndị ọrụ ugbo nke ndị ọrụ ugbo dị ka ndị mmekọ (F)
Tracy Kimathi, Osisi_Sea Mals/Baridi, Kenya
Zụlitere wee webata Baridi-ime ụlọ na-enye ọkụ na-enye ọkụ nke anyanwụ na ohere IoT dịpụrụ adịpụ, na-enwe ọhụụ iji belata mfu mgbe ogbugbu gbadara agbụ ọnụ ahịa anụ ụlọ niile nke East Africa (F)
Sepenica Darko, ụlọ ọrụ FarmerTribe Limited, Ghana
Otu ụlọ ahịa maka ndị ọrụ ugbo pere mpe n'ime obodo maịl ikpeazụ iji nweta mkpụrụ dị mma na mkpụrụ osisi ka mma, agrochemicals na fatịlaịza, ọzụzụ agronomic, ọrụ ndọtị na njikọ ahịa (F)
Ọ na-eji teknụzụ nke aka ya wee megharia nsị ahịhịa n'ime nri azụ nwere protein dị elu na fatịlaịza organic na-eji nje bacteria na onye agha ojii na-efe efe, ebe na-enye ndị ọrụ azụ azụ data iji nyere ha aka melite mkpụrụ ha (F)
Evangelista Chekera, Anụ ọkụkọ Passion, Zimbabwe
Ezubere ma na -arụpụta ma na -ekesa akụrụngwa ọkụkọ ọhụrụ maka ndị ọrụ ugbo obodo mepere emepe (F)
Nhazi usoro na ngwugwu Ukwa (achịcha achịcha) maka ọrịre na ahịa obodo na ụwa niile (F)
Jolenta Joseph, ụlọ ọrụ Sanavita Limited, Tanzania
Ọ na-emepụta ma na-ahazi poteto ụtọ, ọka Pro Vitamin A, na agwa dị elu na zinc yana na-eme mkpọsa mmata na mmemme mmụta ihe oriri (F).